Cumar Keey Oo Lagu Dhaawacay Deegaanka Biyo Cadde. – Bogga Calamada.com
Cumar Keey Oo Lagu Dhaawacay Deegaanka Biyo Cadde.
December 29, 2017 6:44 pm Views: 229
Deegaanka Biyo cadde oo ka mid ah deegaanada ciidamada Kufaarta Burundi iyo maleeshiyaatka Kabo qaadka u ah duulaanka ay kaga suganyihiin gobalka Shabeelada dhexe waxa ay iska hor,imaad ku dhexmartay maleeshiyaat ka wada tirsan dowlada Ridada.
Iska hor’imaadka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaatka dowlada ay ku wada murmeen qeybisaga lacago baad ah oo ay ka qaateen ganacstada deegaanka iyo sidoo kale lacag madax furasho ah oo ay ka qaateen dad shacab ah oo ugu xiran xabsiga deegaankaasi.
Dadka deegaanka waxey warbaahinta u xaqiijiyeen in iska hor’imaadkaasi uu ku dhaawacmay hal askari oo lagu magacaabo Cumar Keey kaasi oo Lix Xabadood ay kaga dhacday dhanka Lugaha.
Sidoo kale dadka deegaanka waxey intaasi ku dareen in askarigaasi iska hor’imaadka ku dhaawacmay uu ahaa askari si aad ah u dhibay bulshada ku dhaqan deegaankaasi,waxeyna dadka deegaanka Muujinayaan cabsi ku aadan iska hor,imaad markale ka dhaca deegaanka maadaama maleeshiyaatka Murtadiinta ay isku hub uruursanayaan.
Inta badan maleeshiyaatka kabo qaadka u ah ciidamada Kufaarta Afrikaanta ayaa shaqo maalmeed ka dhigtay iney dhex dooda dagaalamaan xilli walbo oo ay ku murmaan qeybsiga Maadooriyaha iyo Lacagaha Baada ah ee ay dadka Shacabka ka qaadaan waxeyna sidoo kale maleeshiyaatka Murtadiinta dhexdooda dagaalamaan xilliyada ay daroogeysanyihiin waxeyna waqti walbo oo ay dirir dhexmarta iska dilaan askar iyo saraakiil fara badan.